विद्यालय संवेदनशील कहिले हुने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
सरकारलाई कर नउठ्ने चिन्ता होला, विद्यालयहरूलाई शुल्क नउठ्ने र घाटामा जाने डर होला । तर आम अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्यको चिन्ता छ ।
वैशाख ६, २०७८ साधना प्रतीक्षा
कारोना महामारीका कारण लामो समय बन्द भएका शिक्षण संस्थाहरू खुलेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकमा छाएको खुसियाली फेरि सेलाउन थालेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण दैनिक जीवनका विविध पक्षसँगै शैक्षिक क्षेत्र अझ बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
विगतमा सरकारको भूमिका खासै प्रभावकारी नदेखिएपछि आम नागरिकले परीक्षणमा खासै चासो राख्न छाडेकाले संक्रमितको संख्यामा कमी आएको देखियो । संक्रमितप्रति अन्य व्यक्तिको दृष्टिकोण सकारात्मक नहुनाले संक्रमण भए पनि जटिल अवस्था नआएसम्म गोप्य राख्ने प्रवृत्ति बढ्नाले महामारी मत्थरजस्तै देखियो । आर्थिक जटिलताको सम्भावनाका कारण व्यापार–व्यवसाय आदिसहित जनजीवन सामान्य रूपमा चल्न थालेपछि घरमा दिनभर इन्टरनेटमा भुलिरहेका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन अभिभावक नै आतुर देखिए । केही समय अनलाइन कक्षालाई नै निरन्तरता दिने धैर्य अभिभावकमा नदेखिनु तथा शिक्षालाई व्यापारका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका निजी विद्यालयहरूको घाटा असुली गर्ने स्वार्थ पनि त्यसैमा जोडिनुले ती पुनः खुले । यी दुवै पक्षको अदूरदर्शी सोचका कारण असंख्य बालबालिका संक्रमणको जोखिममा परिरहेका छन् ।
अहिले सरकारले गरेको पीसीआर परीक्षणका आधारमा दैनिक पाँच–सात सय मानिसमा संक्रमण देखिएको छ । यो संख्या कुल परीक्षणको दस प्रतिशत हो । मृत्यु हुनेको संख्या पनि दैनिक सरदर पाँचदेखि सातसम्म देखिन्छ । यसबाहेक अहिले देखिएको कोरोना भाइरस अघिल्लोभन्दा भिन्न प्रकृतिको हुनाका साथै यसको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने क्षमता पनि निकै बढी भएको जानकारी विज्ञहरूले गराइरहेका छन् । पश्चिमी मुलुकहरूसहित भारत नै यतिखेर संक्रमणको चपेटामा छन् । हामीकहाँ चरणबद्ध रूपमा केही मात्रामा भ्याक्सिन लगाइएको भए पनि जनसंख्याका आधारमा त्यो नगण्य देखिन्छ । अर्को कुरा, भ्याक्सिनकै प्रभावकारिता पनि परीक्षणमा छ । प्राथमिकताका आधारमा केहीले पहिलो मात्रा लगाए पनि अठार वर्षमुनिको उमेर समूहका लागि भ्याक्सिन नबनेको सन्दर्भमा हालको परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गरिनुले निकट भविष्यमा स्थिति भयावह नहोला भन्न सकिन्न ।
सम्भाव्य जोखिम टार्न सरकारले अनलाइन कक्षा सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि सञ्चालकहरू विद्यालय बन्द गर्न तयार छैनन् । महामारीको अन्त्य भइनसकेको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा शैक्षिक सत्र लम्ब्याउने सरकारी निर्णय नै अव्यावहारिक छ । शैक्षिक सत्र लम्ब्याउनुभन्दा निर्धारित पाठ्यक्रमलाई केही संकुचन गरेर साबिककै क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिएको भए अहिले असंख्य विद्यार्थी र अभिभावक सन्त्रस्त हुनुपर्ने थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनभित्रै आपत्कालीन रूपमा परीक्षा सञ्चालन गरेर शैक्षिक सत्र समाप्त गर्न र उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म विद्यालय बन्द गर्न कडा निर्देशन दिइहाल्नुपर्छ ।
हाल निजी विद्यालयहरूले सरकारको निर्देशन पालना गर्न नचाहेको देख्दा प्रश्न उब्जिएको छ, जनस्वास्थ्यको सवालमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो कि शिक्षण संस्था ? कतै सरकार पनि शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणको परोक्ष समर्थक भएको त होइन भन्ने आशंका पनि जनमानसमा देखिएको छ । विगतमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा अपेक्षित रकम असुली गर्न नपाएका निजी शिक्षण संस्थाहरूले अनावश्यक रूपमा पटकपटक परीक्षा सञ्चालन गरेर त्यसको भर्पाई गरिसकेका छन् । शैक्षिक सत्र लम्ब्याउनुमा पनि उनीहरूको यही नाफामुखी प्रवृत्ति नै कारक देखिन्छ । कर असुलीका लागि सरकारले पनि निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई साथ दिइरहेकामा दुई मत छैन । अहिले आर्थिक पक्षलाई सर्वोपरि ठानेर शैक्षिक क्षेत्रलाई जनस्वास्थ्यको सरोकार अन्तर्गत नराख्ने हो भने सरकारले भविष्यमा ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
विगतमा भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालनका लागि निश्चित तयारी गर्नुपर्ने सरकारी निर्देशनमा विद्यालयहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जुन व्यवहारमा भने देखिएन । भौतिक दूरी कायम गर्नका लागि कक्षाकोठा तथा शिक्षकको अतिरिक्त व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो, तर त्यसो पनि गरिएन । स्कुल बसमा कोचाकोच गरी विद्यार्थी ओसार्ने क्रम पनि यथावतै देखियो । शौचालय तथा चमेनागृहको अस्तव्यस्तता पनि उस्तै रह्यो । कतिपय विद्यालय प्रशासनले बारम्बार ‘अब कोरोना सकियो’ भन्ने गरेकाले पनि विद्यार्थीहरूले मास्क लगाउनसमेत छाडे । हात धुने तथा स्यानिटाइजरको व्यवस्था पनि नगण्य विद्यालयहरूमा मात्र सीमित देखियो । विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षकहरूले नै मास्क तथा भौतिक दूरीलाई अनावश्यक ठाने । ससाना बालबालिकाहरू त कोरोनापूर्वकै अवस्थामा देखिएका छन् । उनीहरूलाई भौतिक दूरी एवम् सुरक्षा अपनाएर पठनपाठनमा सहभागी गराउनु कठिन मात्र होइन, असम्भव नै देखिन्छ । उपर्युक्त सबै आधारमा बालबालिकालाई आसन्न महामारीबाट जोगाउने एक मात्र विकल्प विद्यालय बन्द गरिनु नै हो । अतः यसमा विलम्ब गरिनु हुँदैन ।
उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा भने तत्कालै आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन, किनभने अहिले कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्या धेरै नभएको हुँदा त्यहाँ भौतिक दूरी कायम गर्न सकिन्छ । परिपक्व अवस्थाका विद्यार्थीहरू स्वयम् सुरक्षाप्रति सचेत देखिन्छन् । परिस्थिति तथा प्रभावकारिता हेरेर पहिलाजस्तै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । यसमा विश्वविद्यालयहरू स्वयम् निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसैले हालको जटिलता भनेको विद्यालय तहको हो ।
सरकारलाई कर नउठ्ने चिन्ता होला, विद्यालयहरूलाई शुल्क नउठ्ने र घाटामा जाने डर होला । तर आमअभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्यको चिन्ता छ । यसतर्फ विद्यालय संवेदनशील हुनैपर्छ । हालको प्राथमिकता भनेको नागरिकको जीवनरक्षा नै हो । जीवन नै नरहे शैक्षिक उन्नयनको अर्थ रहँदैन । विद्यालयका नाममा गरिने व्यापारकै प्रसंगमा पनि, व्यापारले आफ्नो फाइदाका लागि मानव जीवनलाई नै संकटमा पार्न मिल्छ र ? कि व्यापारिक क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व नै हुँदैन ? सरकार पनि नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा व्यापारीहरूको मुनाफा वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्ने लाचार छाया मात्र भएको त होइन ? यी प्रश्नहरू एउटा नागरिकको मात्र नभएर समग्र अभिभावकका हुन् । यदि विद्यालय बन्द नगरेकै कारण परिस्थिति जटिल बन्दै गयो भने यसको उत्तरदायी को ? त्यसैले अब सरकार तथा विद्यालय दुवै पक्ष संवेदनशील भएर तत्कालका लागि विद्यालय बन्द गराइनुपर्छ । आम अभिभावकले पनि आफ्ना नानीहरूलाई घरैमा सकारात्मक गतिविधिमा संलग्न गराउन योगदान गर्नुपर्छ र विद्यालय जान नपाए उनीहरू बिग्रिहाल्छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:५५
पुरुषको श्रेष्ठता क्षमतामा र महिलाको सौन्दर्यमा नापिने विभेदकारी संस्कृति आज पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि, बिहेको प्रसंगमा ‘केटाले के गर्छ ?’ भनेर सोधिन्छ भने ‘केटीलाई कस्ती छ ?’ भनेर हेरिन्छ । के यो महिला र पुरुषको योग्यता नाप्ने भिन्न मापदण्ड होइन र ?
फाल्गुन २३, २०७७ साधना प्रतीक्षा
विद्यावारिधि अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेकी एक मित्रले भनेकी थिइन्, ‘यो काम सम्पन्न भएको दिन त म ढोका थुनेर नजानी–नजानी पनि मज्जाले नाच्छु ।’ अनुसन्धान कार्यका विभिन्न चरणका प्रक्रियामा विज्ञहरूका जुँगाको लडाइँका कारण आफूले खेप्नुपरेको सास्तीका कारण उनले त्यसरी दुखेसो पोखेकी थिइन् ।
उनको त्यो चाहना पितृसत्तातमक मूल्यभित्र युगौंदेखि जकडिएका महिलाहरूको उन्मुक्तिको कामना हो जुन अझै पनि पूर्वाग्रही पुरुषदृष्टिका कारण कुण्ठित नै छ । पितृसत्तात्मक मूल्यले महिलालाई त्यस्तो पन्छी बनाएको छ जसलाई पहिला पखेटा काटिन्छ अनि उडान प्रतियोगितामा सहभागी गराएर ‘अक्षमता’ को टाँचा लगाइन्छ ।
महिलाको शैक्षिक अवस्थाकै कुरा गर्दा, केही अपवादबाहेक साना स्कुलेनानीहरूसमेत पढाइमा मात्र केन्द्रित हुन पाउँदैनन् । घरधन्दामा सघाउनुका साथै भाइ वा बहिनीको जिम्मेवारी लिँदै उनीहरू त्यसबाट उब्रेको समयमा मात्र पढ्ने गर्छन् । उच्च शिक्षाको अवसरसम्म पुगेकाहरूको व्यथा पनि कम मार्मिक हुँदैन । टाढा किन जानु ! आफ्नै कक्षाका छात्राहरूले घरव्यवहार तथा बालबच्चाको जिम्मेवारी पूरा गरेर बचेको समयमा पढ्न आएको सुनाउँदा कताकता मन चसक्क हुन्छ किनकि त्यही बाध्यात्मक परिवेशमा उनीहरूको सिकाइ अल्झिरहेको हुन्छ । शोधपत्र अन्तिम समयसम्म पनि पूरा गर्न नसकी कसैले गर्भमा त कसैले काखमा नानी लिएर लाचारीका साथ शोधनिर्देशकसँग अनुनय गरिरहेका दृश्यहरूले बराबरीको सिद्धान्तलाई उपहास गरिरहेको हुन्छ ।
विद्यावारिधिकै सन्दर्भमा पुरुषलाई ‘डार्साब’ र महिलालाई ‘फलानाकी स्वास्नी’ को पहिचान दिने हाम्रो पुरुषप्रधान समाजमा मेरी ती साथीजस्ता असंख्य महिला शोधार्थीहरूले अनगिन्ती मानसिक उत्पीडन खेपिरहेका छन् । एकातिर पारिवारिक दायित्व निर्वाह, अर्कातिर पेसागत जिम्मेवारी । यी दुवैका बीचबाट उनीहरूले आफ्नो प्राज्ञिक पहिचानका लागि पाइला चालिरहेका हुन्छन् तर पनि विज्ञहरूका पुरुष नजरले उनीहरूमाथि सहानुभूति राखेर प्रोत्साहित गर्नुसट्टा हतोत्साही गराइरहेका हुन्छन् । पुरुषश्रेष्ठताका उदाहरणले महिलाका उच्चाकांक्षामाथि तुषारापात गरिरहेको हुन्छ । स्वतन्त्रता र समानताको मागसहित अस्तित्व र पहिचानको यात्रामा महिलाहरू अग्रसर भएको दुई शताब्दी भइसक्दा पनि सो यात्रा पितृसत्ताकै जालोमा अल्झिरहेको विडम्बनामा छौं हामी ।
घरको चारभित्ता पार गरेर बाहिरी संसारमा सरिक हुने महिलाका पीडा बेग्लै छन् । पुरुषकी अर्धांगिनी होइन, स्वयं पूर्णांगिनी बन्ने अनि पुरुषको पहिचानको खोलबाट निस्केर आफ्नै स्वतन्त्र पहिचान बनाउन चाहने महिलाका भोगाइ भिन्दै छन् । शारीरिक तथा मानसिक थकानका कारण सुस्केरासम्म हाल्न पाउँदैनन् उनीहरू किनकि पुरुष–आवाज यसरी कटाक्ष गर्न आइपुग्छ, ‘कसले भनेको थियो र ?
आफैंले बेसाएको दुःख त हो नि ।’ धन्य पुरुष, तिम्रो उदारता ! उनीहरूको थकित काँध थपथपाएर हौसला दिनु, घरेलु भूमिकामा थोरै भए पनि साझेदारी गर्नु त कता हो कता, उल्टै काखी बजाउने गरिन्छ । कर्तव्य र दायित्वको दोहोरो–तेहरो भूमिकामा महिलाको अस्तित्व र पहिचानको यात्रा झन्झन् कठिन बन्दै जाने गर्छ ।
पितृसत्ता महिलाका लागि जति उत्पीडनकारी छ, त्योभन्दा कम उत्पीडक छैन पितृसत्तात्मकता जसले महिला स्वयंलाई पितृसत्ताको पृष्ठपोषक बनाउने गर्छ । त्यसैले त हाम्रो पहिचानको यात्रा पुरुषप्रधान संस्कृतिकै सेरोफेरोमा अल्झिरहेको छ । युगौँदेखि महिलालाई भोग्या तथा आफ्नो मनोरञ्जनको साधन बनाउँदै आएको यो संस्कृतिले समयसापेक्ष आफूलाई परिवर्तित गर्दै आएको छ । रूप परिवर्तित भए पनि अन्तर्वस्तु उही भएको पुरुषप्रधान संस्कृतिको ललिपपमा कतै हाम्रो पहिचान हराइरहेको त छैन ? खोजीको विषय बन्नुपर्छ अब किनकि पुरुषको श्रेष्ठता क्षमतामा र महिलाको सौन्दर्यमा नापिने विभेदकारी संस्कृति आज पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि, बिहेको प्रसंगमा ‘केटाले के गर्छ ?’ भनेर सोधिन्छ भने ‘केटीलाई कस्ती छ ?’ भनेर हेरिन्छ । के यो महिला र पुरुषको योग्यता नाप्ने भिन्न मापदण्ड होइन र ?
पुरुष गमक्क पर्छ आफ्नो सामर्थ्य र योग्यतामा अनि महिला मक्ख पर्छे अझै पनि नाशवान् सौन्दर्य र जवानीमा । पुरुष नारीदेहलाई मनोरञ्जनको साधन बनाउन चाहन्छ र त उनीहरूका लागि आफ्नो रुचिअनुसारको सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री बनाउने गर्छ । उग्र नारीवादी केट मिलेटले ‘सेक्सुअल पोलिटिक्स’ मा भनेजस्तै पितृसत्तामा महिलाका बारेमा व्याख्या गर्ने प्रतीकहरू पुरुषनिर्मित छन् । महिलाछविको निर्माण र उनीहरूको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त फेसन पनि पुरुषले नै बनाएका हुन्छन् । यस्तै पितृसत्ताभित्रको पुँजीवादी संस्कृतिले महिलाको सौन्दर्य प्रतियोगिता गराएर आफ्नो व्यापार बढाउने गर्छ । विडम्बना, हामी महिला सोही ताज पहिरेर आफूलाई ब्रह्माण्डविजेता ठान्छौं । यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
पितृसत्ता अत्यन्त चतुर छ । युगौंदेखि उसले अति चतुरताका साथ महिलाबाट उसको सत्ता हत्याएको हो । त्यसैले त ऊ महिलाको बौद्धिक उन्नयनमा सदा बाधक बन्ने गर्छ । ऊ चाहँदैन आफ्नो विरासतमा महिलाले पनि दाबी गरोस् । महिलामाथि नियन्त्रण कायम राख्न पुरुषले प्रथमतः उसको बाटोभरि प्रशंसाका फूलहरू छरिदिन्छ ताकि मक्ख भएर महिलाले आफ्नो गन्तव्य बिर्सियोस् । त्यसबाट मोहित नहुने महिलाको बाटामा त्रासका काँडाहरू छरिन्छन् ताकि ऊ भयभीत भएर फर्कियोस् र आत्मसमर्पण गरोस् । त्यसबाट पनि नडग्नेहरूका लागि त पुरुषसत्ताले निषेधको नीति अवलम्बन गर्न बाँकी राख्दैन । अनेक बाधा, व्यवधान र परिबन्दहरू पार गरेर पुरुषसत्ताले स्थापित गरेका मूल्यमान्यता भञ्जन गर्दै महिलाले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा कम छैन ।
अधिकांश महिलाको गुनासो हुन्छ— ‘मेरा श्रीमान्ले ब्युटिपार्लर तथा सपिङ जान कहिल्यै रोक्नुहुन्न र जति खर्च गरे पनि केही भन्नुहुन्न तर सभासम्मेलन वा कुनै कार्यक्रममा जानै दिनुहुन्न,’ ‘लुगा, गहना र शृंगारका सामान जति पनि किनिदिनुहुन्छ तर किताब किन्ने कुरा गरें भने उहाँको मुडै बिग्रन्छ ।’ यस्तै, साहित्यमा रुचि राख्ने एक महिलाको दुखेसो पनि कम मार्मिक छैन, ‘मुस्किलले समय निकालेर लेख्ने गर्छु । किताब प्रकाशित गर्ने कत्रो धोको छ तर उहाँले गहना कति चाहिन्छ भन्, किताबका कुरा नगर्, अनुत्पादक काम भनेर ठाडै अस्वीकार गर्नुहुन्छ ।’ महिलाको पहिचान पुरुषका लागि अनुत्पादक नै बन्ने गर्छ किनकि यस्ता महिलाबाट उनीहरूको सत्तामाथि सदा खतराको घण्टी बज्ने गर्छ ।
पितृसत्ताको यस्तो रणनीति नबुझेर कतिपय महिला उनीहरूको आज्ञाकारी अनुयायी बनेर महिलामाथि नै जाइलागेको देख्दा विगतमा कैयौं महिलाले संघर्ष गरेर स्थापित गरेको पहिचानको सन्दर्भ नै निरर्थक लाग्ने गर्छ । नारीत्व र पुरुषत्व जन्मजात नभएर समाजनिर्मित हो भन्ने चर्चित नारीवादी विचारक सिमोन दी बुभायरले महिलाको शरीर तथा सौन्दर्यप्रतिको पुरुषवादी सोचलाई भत्काउनुपर्ने धारणा राखेकी छन् । ६८ वर्षको उमेरमा एलिस स्वेर्जरसँग कुराकानी गर्दै उनले आफू एक बौद्धिक महिला भएको हुँदा आफ्ना असली हतियार आफ्नै शब्द हुन् भनेकी छन् । पितृसत्ताले स्थापित गरेको शाश्वत स्त्रीत्वसम्बन्धी धारणालाई भ्रम मान्ने उनको भनाइअनुसार पितृसत्ताका अनुयायी तथा जानी–नजानी पुरुषअनुकूल हुने महिलाले पुरुषले बनाएको खेल खेल्दै ज्ञान र सत्यबाट टाढा रहेर पुरुषलाई महिलामाथि शोषण गर्ने अनुमति दिइरहेका हुन्छन् । उनको यस्तो धारणा अहिलेसम्म पनि वास्तविकताको नजिक देखिन्छ ।
आजसम्म पनि पहिचानतर्फको हाम्रो यात्रा कतै अल्झिरहनुमा सत्ता, शक्ति र अवसरहरूमा महिलालाई पुग्नै नदिएर उनीहरूलाई आफ्नो समकक्षी हुनै नदिने पितृसत्तात्मक खेल नै जिम्मेवार देखिन्छ । यही खेलमा बाँडिएका रंगीन खेलौनामा लोभिएर आफू हुनुको अस्तित्व बिर्सने नारी मानसिकता पनि दोषमुक्त छैन । त्यसैले यी दुवै प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म हामी जति हिँडे पनि कतै पुग्न सक्नेछैनौं । जति उडे पनि पुरुषले ओगटेको आकाशमाथि निर्बाध फैलन सक्ने पनि छैनौं । पितृसत्ताको भूलभुलैयामा केवल दौडिरहनेछौं, मात्र दौडिरहनेछौं ।
प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०८:२५